DAAWO: Arsenal oo ku Guuleysatay Community Shield
Friday, December 14th, 2018 - 02:32:44
Monday August 07, 2017 - 10:44:56 in Wararka by
Alvaro Morata ayaa lumiyey fursadiisii laaga rigoodhaha ahayd, kulankii u horeeyey ee uu Chelsea u safto, ciyaar ay Arsenal ay kaga guuleysatay oo ka qaaday koobka Community Shield oo la isla gaadhay rigoodhayaal garoonka Wembley.
Ciyaaryahanka ay qiimaha ugu sareeya ku soo iibsadeen ee Morata – oo kulanka bedel ku soo gallay xili ay dhamaadkii ku dhawdahay – ayaa si daciif ah ugu ganay goolka dhinacna ka mariyey kadib markii uu goolwade Thibaut Courtois isaguna cirka u diray kubaddii labaad ee uu Chelsea laagatay, nidaamka rigoodhe-laagasho ee cusbaa.
Kooxda horyaalka Premier League haysata ee Chelsea ayaa ku hogaanka ciyaarta ugu qabatay gool uu u saxeexay Victor Moses, ka hor intii aan Pedro kaadhka casaanka ah lagaga saarin xanaaqad uu kula kacay Mohamed Elneny darteed.
Xanaaqadii loo dhigay laageediina aanu dhalin in Arsenal goolka barbar dhaca la iman, kaas oo uu madax ugu saxeexay Sead Kolasinac, ciyaartuna ku dhamaan in rigoodhayaal lagu kala baxo.
Rigoodheyaashii – oo nidaamkooda ABBA markii ugu horeysay kubadda Ingiriiska lagaga dhaqmo loo qoondeeyey – kooxda Chelsea ayaa laba jeer iska khasaarisay midna dhashatay saddexdii laag ee ay ganeen halka Arsenal afar uu u dambeeyey Olivier Giroud guusha kula caraabin.
Waa Sidee Nidaamka ABBA ee Laaga Rigoodhayaasha…..?
Nidaamkan cusub oo sharci ahaan la meel mariyey sanadkii hore, ayaa dhigaya in kooxda laaga koobaad qaadata maahee ta kale, ay laba jeer oo is xigta laagtaan, kadibna kooxdii ku horeysay ku soo noqonayso oo laba jeer iyaduna laaganayso.